Ny fiteny malay na fiteny maley dia fiteny aostrônezianina izay tenim-pirenen' i Malaizia, Indônezia ary Boroney. Anisan' ny teny ôfisialin' i Singapaoro ihany koa ilay fiteny na dia tsy fiteny iombonana intsony aza. 40 tapitrisa ny isan' ny olona mahay miteny malay, izay hita eo amin' ny manodidina ny andilan-dranomasin' i Malacca sy ny morontsiraky ny nosy Bôrneô ary ny faritra atsinanana ao Somatra. Noho ny sata ôfisialiny dia mahery ny 200 tapitrisa ny isan' ny olona mahay miteny malay (raha isaina ao anatin' izay ireo olona mahay miteny indônezianina).
Mifanaraka amin' ny fiavian' ny teny malay ho avy amin' ny morontsiraka andrefan' i Bôrneô ireo mpahay fiteny malay.
Kanefa kosa, ny tahirin-tsoratra antitra indrindra hita tamin' ny fiteny malay, ny soratra Kedukan Bukit, izay nosoratana tamin' ny taona fitonjato taor J.K., sy hita teo moron' ny ony Tatang, ao Somatra Atsimo. Ny fiteny nosoratana tamin' izany fotoana izany no nolazaina fa fiteny malay taloha. "Malayu" no anaran' ilay fanjakana taloha teo amin' ny misy ny faritanin' i Jambi ao atsinanan' i Somatra. "Mo-lo-yo" no anaran' izany fanjakana izany anatin' ny tahirintsoratra sinoa.
Vokatry ny fandrantoana ary ny fiorenan' ny fanjakana malay silamo eran' ny tambanosy malay ny fampiasana ny fiteny malay ho fiteny iombonana. Nampiasa teny malay an-tsoratra ny tao Malacca. Taorian' ny fandresen' ny Pôrtogey tao Malacca tamin' ny 1511 dia niova ho tany ao amin' ny soltanàtan' i Johor ny foiben' ny fiteny soratana. Ary antsoina matetika ho fiteny malain' i Johor ny fiteny an-tsoratra, na dia fiteny malain' i Malacca foana aza no ampiasaina. Rehefa voazaran' ny mpanjana-tany ny faritany itenenana malay (anglisy ny ao Johor fa nerlandey tao India Atsinanana nerlandey), dia nomena sata ôfisialy tamin' ireo faritany ireo ny fiteny malay.
Rehefa nahaleotena i Indônezia dia ny fiteny malain' i Riau (Malacca-Johor) no nataony ho teny ôfisialiny. Manomboka tamin' ny 1928 dia nolazain' ireo tanora malay sy ireo tia tanindrazana eran' ny tambanosy fa ho teny ôfisialy eran' i Indônezia ny fiteny malay, araky ny nambaran' i Sumpah Pemuda. I Indônezia, noho izany, no firenena voalohany mahaleotena mampiasa ny fiteny malay ho fiteny ôfisialy.
Any Malaizia, ny andininy faha-152 ny Federasiôna dia manaambara fa ho fiteny ôfisialy (Bahasa Malaysia) ny fiteny malain' i Johor (Malacca). Tamin' ny 1986 dia navadika ho Bahasa Melayu ny anarana ôfisialin' ny fiteny ôfisialin' i Malaizia, fa niova indray ilay izy nanomboka tamin' ny 2007.
Fiteny ôfisialin'i Boroney ny Bahasa Melayu araky lalàm-panorenana tamin' ny taona 1959. Mifototra amin' ny fenitra malakanina ilay fiteny.
Mety samihafa ny voambolana ampiasain' ny fiteny malay sy ny fiteny indônezianina noho ny fivoarana misaraka vokatry ny fanjahanan-tany. Ireo tenin' ny mpajana-tany no tena nianjady tamin' ireo fiteny ireo. Ao amin' ny fiteny indônezianina izao ohatra dia ahitana teny maromaro avy amin' ny fiteny nerlandey; ary ahitana teny anglisy maromaro ao amin' ny fiteny malay. Nampiombonana ny tsipelin' ny fiteny malay sy indônezianina tamin' ny 1982, ary namorona vaomiera hampiombona ny voambolana siantifika sy teknika miaraka amin' i Boroney ireo firenena roa ireo.
Sokajim-piteny[hanova | hanova ny fango]
Ny fiteny malay dia fiteny ao amin' ny vondrom-piteny aostrônezianina, izay ahitana ny fiteny tagalôga sy ny fiteny malagasy koa, ohatra. Na dia tsy mifankahazo aza ny mpiteny malay sy ny mpiteny malagasy, manaitra ny fitoviany. Maro ny teny iraisan' ireo fiteny maro ireo, indrindridra mikasika ny fahasalamana sy ny vatana ary biby fahita matetika. Betsaka koa ny fitovizana amin' ny anaran' ny isa.
Mampiasa ny abidy latina (rumi) ny fiteny malay ankehitriny, na dia mbola miasa koa aza ny abidy arabo (jawi), abidy ôfisialin' i Malaizia, Singaporo ary Indônezia. Samy ôfisialy any Malaizia sy any Boroney ny rumi sy ny jawi. Nosoratana tamin' ny alalan' ny soratra Pallava ary Kawi ny fiteny malay taloha, araka ny vato nasian-tsoratra ao amin' ny faritra malay.
Feon-teny[hanova | hanova ny fango]
Tabilaon' ny renifeo amin' ny fiteny malay manara-penitra
Mety hotononin' ireo mpahay teny arabo hafa ireo feon' ny teny avy amin' ny fiteny arabo. Raha tsy izany dia mety ho voatonona araky ny fitsipiky ny fiteny malay.
Teny manaiky ny fitambatambaran' ny voanteny na ny hasin-teny ny fiteny malay, ary azo foronina amin' ny alalan' ny fomba telo ny teny vaovao: fanisiana tovona na tovana amin' ny fototeny iray sy fanakambanan-teny ary fanaovana teny verindroa (famerimberenanana fototeny iray). Mety fototeny tsotra ny anarana sy ny matoanteny, fa matetika asiana tovona, tovana na tsirinteny sara-droa izy ireo.
Tsy manavaka ny teny amin' ny alalan' ny kilahivavy ny teny malay, ka tsy misy ny kandahy na kambavy. Tsy misy ihany koa ny mpampanavaka ireo milaza tokana sy ny milaza maro.
((id)) Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam jaringan Archived Desambra 24, 2011 at the Wayback Machine (Rakibolana lehibe amin'ny teny indonezianina)
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiteny_malay&oldid=1044199"
Voaova farany tamin'ny 27 Febroary 2022 amin'ny 20:11 ity pejy ity.